Ezinhlobonhlobo zefenisha, ethandwa kakhulu, ngaphandle kokunyusa, sebenzisa ama-sofas, futhi ikakhulukazi ama-sofas aguquguqukayo. Futhi akukho okumangalisa ngalokhu. Phela, enye isepha ingahlanganisa imisebenzi eminingana ngesikhathi esisodwa.
I-transformer yefenisha - umbhede wefafa
Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi i-soft transformer ye-multifunctional iyinhlangano ehlukahlukene kakhulu yefenisha ephakanyisiwe yezindlini ezincane, lapho ku-akhawunti, ngokoqobo, njalo ngamentimitha. Futhi kuyindlela ehlukile kakhulu yokulala indawo yokulala ekamelweni labantwana. Kuyini inzuzo ngaphezu kwezinye izinhlobo zefenisha ephakanyisiwe ? Ake sibone ngokuhlelekile. I-transformer ye-sofa iqala ekuklanyeni kwayo enye indlela noma uhlobo oluthile lokumathisa, ngenxa yokuthi (i-sofa) ingashintshwa ibe yindlala ekhululekile ngokwanele ngaphandle komzamo omkhulu. Kodwa, futhi lokhu kubalulekile! - ngaphambi kokuba unqume ngesimo esithile se-sofa, qaphela ama-nuances angakusiza wenze ukhetho oluhle futhi ungadumali ukuthenga okungewona okuhle.
Ukukhetha i-transformer ye-sofa, kufanele ucabangele ...
Zonke izinhlobo zezinhlelo zokuvula ama-sofas, kuye ngokuthi indawo yendawo yokulala, ingahlukaniswa ngamaqembu amabili:
umbhede ngemuva kokubekwa kwefa usetshenziswe emuva;
indawo yokulala itholakala nge-perpendicular kuya ngemuva kwefa.
Ngakho-ke, uma ungenayo isikhala samahhala ekamelweni, okukhethwa kukho kungcono isofthiwe esivela eqenjini lokuqala (i-compact ngaphezulu esimweni esibonakalayo). Futhi inokwethenjelwa kakhulu kule mkhakha yilezi zinsizakalo ezine-"eurobook". Umgomo wokuguqulwa kwawo ulula futhi awudingi umzamo omkhulu - isihlalo siqhubekela phambili, futhi emuva kuncishiswa endaweni ephakeme. Ngakho-ke, i-transformer ye-sofa iphenduka ubhede obuningi obanzi obubanzi. I-Sofas yalolu hlobo ingaba nesistimu yokuphoqa "ihlengethwa", "chofoza-clack" nencwadi "yendabuko" yendabuko.
Esikhathini sefassi ehamba ngokuphambene ne-backrest, izinhlelo ezilandelayo zisetshenziswa: "i-clamshell yesiFulentshi" (i-mixotual), i- accordion , "i-Spartacus" (ukuthuthukiswa kwakamuva kwabenzi befenisha yase-Italy, ama-sofas anesimiso esinjalo afaneleka kakhulu kubantu abade).
Uma ukhetha i-sofa ye-transformer, kufanele uqaphele ikhwalithi yendwangu yokuphumula, ukugcwaliswa kwengxenye elula, ukuba khona kwebhokisi lelineni lokugcina imibhede. Ukuthi izici zekhwalithi zalezi zinkomba ziphakeme kangakanani ngokuyinhloko zixhomeke ekududuzeni kwakho kanye nokuphila kwefafa.
Izinguquko zokwakha okhethekile
Uma unezindawo ezincane kakhulu noma igumbi elincane kakhulu ngokwanele lokucindezela ngisho ne-sofa encane kunazo zonke akunakwenzeka, ungalilahli ithemba nganoma isiphi isimo! Imakethe yefenisha inikeza ukuxazulula le nkinga ngosizo lwe-sofa yomshintshi ofanayo, kodwa lifaka embhede webunk uma kunesidingo. Ukwakhiwa kunesiteji esakhelwe ngaphakathi, esisebenzela kokubili ukusekela futhi njengesibambiso esinokwethenjelwa. Okubaluleke kakhulu, ukwethenjelwa kwendlela yokunamathisela kwi-sofas yaloluhlobo kuqinisekiswa uhlelo olukhethekile olwenziwe ngokuzivikela ngokumelene nokunyakaza okuzenzekelayo.
Futhi enye inguqulo yendawo yefenisha ephakanyisiwe endaweni elinganiselwe kakhulu - umshini wokuguqula umbhede we-sofa wokunamathisa. Ukusebenza kwefenisha enjalo ezimweni ezinzima kunzima ukugcizelela. Ngendlela ehlangene - lena yilapho encane encane, kanti indawo yokulala ngesimo somatilasi kuhlaka olukhethekile lufihlwe niche yedonga. Ngaphezu kwalokho, ukuze ukwandise ukulula kwenqubo yokuvula isobho salolu hlobo, umklamo ungahlonywa ngendlela ekhethekile ne-electric drive kanye nokulawula okukude.
Itafula ekhishini eliseduze
Izindwangu kusuka ekukhwameni
Ukukhanya kwelanga lokukhanyisa ukukhanya kwelanga ukukhanya kwelanga
Amatafula amancane ekhishini
I-plaster ngemisebenzi yangaphandle
Izinto zangaphakathi zendlu
Ifenisha yanamuhla ekamelweni lokulala
Indlela yokwenza ikamelo lokulala ekamelweni?
Ifenisha yekamelo lokulala - ukuklama
Indlela yokugeza ikhabethe ekhaya?
I-New Fashion Spring-Summer 2014
I-Carp - inzuzo nokulimala
Utamatisi waseSiberia ukukhula kokuqala - izici kanye nencazelo yezinhlobonhlobo, izici ezikhethekile zokulima
Amakhredithi amancane wombuso ojikelezayo
Ijusi le-lemon lihle futhi libi
Isiketi se-white denim
I-Estonian Art Museum
I-manicure yesiFulentshi - imibono engu-60 kunoma yikuphi ukuma nobude bezinzipho
Yini ongayinika intombazane esanda kuzalwa?
Izinwele zezinwele - ngo-2012
Soup kharcho kule multivariate
UGwyneth Paltrow noChris Martin bahlukanise
Namibia - imigomo
I-Wreath Charm - incazelo